Circle (2015) | MM Movie Store
မဲပေးရမယျ့ အခြိနျ ရောကျပွီ ဆိုတော့ မဲပေးတဲ့ကားလေး ကွညျ့လိုကျကွရအောငျဗြာ။ဘယျလို မဲပေးကွမှာလဲ? ကိုယျ့ကို မဲပေးဖို့ လုပျရမှာလား? ကိုယျ့ကို မဲမပေးဖို့ လုပျရမှာလား?ဘယျသူတှအေတှကျ ဘယျလို မဲဆှယျကွမှာလဲ?ဇာတျလမျးကတော့ ဒီလိုပါ။
လူအယောကျ ၅၀ ဟာ အမှောငျခနျးကွီးတဈခနျးမှာ နိုးလာပါတယျ။သူတို့ကို ကို စကျဝိုငျးတဈခုထဲမှာ ထားပါတယျ။ ကလေး၊ လူကွီး၊ လူဖွူ၊ လူမညျး၊ ကိုယျဝနျဆောငျ၊အိမျထောငျသညျ၊ အပွာကားမငျးသမီး … စသဖွငျ့ ပါပါတယျ။
အဲဒီထဲကနမှေ နှဈမိနဈကို တဈယောကျနှုနျးနဲ့ သတျဖို့ လူကို ရှေးရပါတယျ။ ဘယျသူ့ကို ရှေးမယျ ဆိုတဲ့ စံကတော့ ရှိနတေဲ့ စကျဝိုငျးထဲက လူ ၅၀နဲ့ပဲ ဆိုငျပါတယျ။ဒီတော့ ဘယျသူ့ကို ရှေးမယျဆိုတာကို မဲပေးကွတဲ့အခြိနျမှာတော့ …..လူ့သဘော၊ လူ့သဘာဝတှကေို ဒီဇာတျလမျးထဲမှာ မွငျရပါမယျ။
လူ့အသိုငျးအဝိုငျးရဲ့ စံသတျမှတျခကျြတှကေိုမွငျရပါမယျ။ လူမြိုးရေး ခှဲခွားတာတှေ၊ ပတျဝနျးကငျြရဲ့အပယျခံလူသားတှေ၊ ဘာသာတရား ခှဲခွားမှုတှဒေါမြိုး ဝိဝါဒကှဲစရာတှကေို မွငျရမှာပါ။ ဇာတျကား ကွာမွငျ့ခြိနျ တဈနာရီခှဲ ဆိုပမေယျ့ လူတဈယောကျ သသှေားတိုငျး သသှေားတိုငျး အတှေးတှေ ကနျြခဲ့ရမယျ့ ဇာတျလမျးမြိုးပါ။
နောကျဆုံးမှာရော ဘယျသူ အသကျရှငျကနျြမလဲ ဆိုတာကို ရငျတမမနဲ့ ကွညျ့ရမယျ့ ဇာတျကားကောငျးတဈကား ဖွဈပါတယျ။IMDb – 6/10 ရထားပွီးတော့ ၁၉၅၇ ခုနှဈတုနျးက ထှကျရှိခဲ့တဲ့ 12 Angry Men ဇာတျကားကို Inspire လုပျပွီးရိုကျကူးထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
မဲပေးရမယ့် အချိန် ရောက်ပြီ ဆိုတော့ မဲပေးတဲ့ကားလေး ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာ။ဘယ်လို မဲပေးကြမှာလဲ? ကိုယ့်ကို မဲပေးဖို့ လုပ်ရမှာလား? ကိုယ့်ကို မဲမပေးဖို့ လုပ်ရမှာလား?ဘယ်သူတွေအတွက် ဘယ်လို မဲဆွယ်ကြမှာလဲ?ဇာတ်လမ်းကတော့ ဒီလိုပါ။
လူအယောက် ၅၀ ဟာ အမှောင်ခန်းကြီးတစ်ခန်းမှာ နိုးလာပါတယ်။သူတို့ကို ကို စက်ဝိုင်းတစ်ခုထဲမှာ ထားပါတယ်။ ကလေး၊ လူကြီး၊ လူဖြူ၊ လူမည်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊အိမ်ထောင်သည်၊ အပြာကားမင်းသမီး … စသဖြင့် ပါပါတယ်။
အဲဒီထဲကနေမှ နှစ်မိနစ်ကို တစ်ယောက်နှုန်းနဲ့ သတ်ဖို့ လူကို ရွေးရပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကို ရွေးမယ် ဆိုတဲ့ စံကတော့ ရှိနေတဲ့ စက်ဝိုင်းထဲက လူ ၅၀နဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။ဒီတော့ ဘယ်သူ့ကို ရွေးမယ်ဆိုတာကို မဲပေးကြတဲ့အချိန်မှာတော့ …..လူ့သဘော၊ လူ့သဘာဝတွေကို ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ မြင်ရပါမယ်။
လူ့အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုမြင်ရပါမယ်။ လူမျိုးရေး ခွဲခြားတာတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အပယ်ခံလူသားတွေ၊ ဘာသာတရား ခွဲခြားမှုတွေဒါမျိုး ဝိဝါဒကွဲစရာတွေကို မြင်ရမှာပါ။ ဇာတ်ကား ကြာမြင့်ချိန် တစ်နာရီခွဲ ဆိုပေမယ့် လူတစ်ယောက် သေသွားတိုင်း သေသွားတိုင်း အတွေးတွေ ကျန်ခဲ့ရမယ့် ဇာတ်လမ်းမျိုးပါ။
နောက်ဆုံးမှာရော ဘယ်သူ အသက်ရှင်ကျန်မလဲ ဆိုတာကို ရင်တမမနဲ့ ကြည့်ရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။IMDb – 6/10 ရထားပြီးတော့ ၁၉၅၇ ခုနှစ်တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ 12 Angry Men ဇာတ်ကားကို Inspire လုပ်ပြီးရိုက်ကူးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Inside Men : The Original (2015)
Tomie: Another Face ( 1999 )